Panjakana Mpanohitra - Ooreka - Ny mpahay lalàna ao Frantsa online!
Panjakana Mpanohitra - Ooreka
Hatramin'ny janoary, ny dingana ho amin'ny fanarenana ny vahoaka trosa dia tafaray ao anatin'ny iray fomba: ny ara-panjakana ny fakana an-keriny ny antoko fahatelo tompon'Manolo, indrindra fa ny filazana ny antoko fahatelo holder sy ny fitantanan-draharaha ny mpanohitra. Talohan'ny fampiraisana ny fomba fiasa, ny daholobe tahirim-Bola efa roa indrindra ny fomba arahina ampiharina ny famoriam-bola, ny torohevitra ho antoko fahatelo dia mpihazona, sy ny fitantanan-draharaha ny mpanohitra.
Ny voalohany dia ampiasaina ho amin'ny fanangonana ny hetra, raha ny faharoa mikasika ny fanarenana ny lamandy sy ny sazy.
Ankehitriny, ny ara-panjakana ny fakana an-keriny ny antoko fahatelo tompon efa ho ny zavatry ny fanarenana ny trosa na inona na inona (lahatsoratra L, Bokin ny hetra ny fomba fiasa). Ny daholobe tahirim-Bola dia afaka miditra ao amin'ny kaonty ny mpitrosa na oviana na oviana raha tsy amin'ny alalan'i ny mpitsara. Ny oppositions, ny ara-panjakana ny vahoaka fandatsahan-drakitra nalefa tany amin'ny paositra ny asa fanompoana. Izy ireo no nanao ny fanarenana ny heloka bevava ny lamandy sy ny sazy napetraky ny fanajana ny contraventions ny voalohany, faharoa sy ny fahatelo dia ny kilasy. Ny fampahafantarana dia tokony ahitana ny toetry ny tsara, ary koa ny daty ny fanalam-baraka raha toa ka dia raikitra ho faty mba ho bebe kokoa. Izy no nampahafantarina tamin'izany andro izany ny olona mendrika ho fandoavam-bola, sy ny olona ara-dalàna na fikambanana izay mihazona ny vola nandritra ny tantaran ny mpitrosa.
Ny antoko fahatelo mpihazona izay dia nampahafantatra ny fitantanana ny mpanohitra dia matetika ny mpitrosa ny banky.
Ny daholobe tahirim-Bola, amin'ny alalan'ny fomba izany, ny tanjona dia ny hisambotra vola mifanaraka, ohatra, ny contraventions mifandraika amin'ny lalana fifamoivoizana ny fandikan-dalàna. Fanamarihana: eo anoloan'ny mpanohitra ny fitantanana, ny daholobe tahirim-Bola tokony ho nalefa tany maro ny fangatahana fandoavana ny mendrika mpitrosa (mariho ny fanitsakitsahana, ny filazana ny vokatra, sns.). Izany dia ao amin'ny tranga izay ny mpitrosa dia tsy mandray karama ao anatin'ny fe-potoana voalaza mikasika ny minitra vitsy izy dia nahazo ny fitantanana ny mpanohitra.
Ny fitantanan-draharaha ny mpanohitra, toy ny filazana ny antoko fahatelo mpihazona (ATD), ny vokatry ny avy hatrany ny mari-pankasitrahana ny vola mba ho ekena.
Na izany aza, ny maha samy hafa ny ATD, ny mpanohitra dia afaka mitondra, afa-tsy vitsivitsy maningana, rehetra kaonty amin'ny banky, ary tsy izany ihany amin'ny amin'izao fotoana izao ny tantara. Ny banky ankavia misy ny mpitrosa ny uncatchable karama karama momba ny kaonty. Ny banky dia afaka ny ho saro-takarina (SBI) dia tena mitovy ny habetsahan'ny ny afrika atsimo ho an'ny olona iray raha tsy misy ireo ankizy (hatramin'ny volana aprily taona). Ny fakana an-keriny ny vola ao amin'ny kaonty banky izay niafara tamin'ny banky fiampangana, indraindray lehibe. Ho fantatrao, izany dia azo atao ny manamarina ny fifanarahana tamin'ny banky Ny habetsaky ny saran'ny banky tao anatin'ny iray ara-panjakana ny mpanohitra dia tsy afaka mihoatra ny ny vola noho ny daholobe tahirim-Bola (andininy faha- ao amin'ny lalàna fitantanam-bola lalàna ho an'ny taona, ny desambra, araka ny nasiam-panitsiana ny lalàna fitantanam-bola ny desambra). Hatramin'ny janoary, ny banky fiampangana ampiharina amin'ny raharaha ara-panjakana ny fakana an-keriny ny antoko fahatelo mpihazona ny amin'ny kaonty banky dia nahatratra ny fara tampony amin'ny ny vola niditra tao amin'ny fetra (didim-panjakana n° - desambra, taona). Ny vola tsy maintsy averina ao anatin'ny andro ny fandraisana ny fakana an-keriny ny banky miaraka amin'ny kaonty misahana ny famoriam-bola, afa-tsy ny fanafahana nomen'ny daholobe tahirim-Bola. Saina: ny mpanohitra ara-panjakana nahatonga ny fanakanana ny kaonty amin'ny banky, ny mpitrosa nandritra ny andro. Mialoha ny hetsi-panoherana, dia azo atao ny mangataka ny manokana bebe kokoa ny vaovao any amin'ny mpitahiry vola-payeur-jeneraly mifanaraka amin'izany ny vola izay efa nanambara ny mpanohitra. Io fangatahana vaovao dia tsy mitsahatra ny fe-potoana farany ho an'ny mpifaninana. Izy dia nanoro hevitra ny mitady fotoana miaraka amin'ny mpanara-maso ny hetra Izany dia azo atao, indrindra indrindra, mangataka ny hetra fitantanana ny fotoana ny fandoavam-bola. Ny fe-potoana farany ho an'ny fifaninanana dia roa volana manomboka ny fampahafantarana ny fitantanana ny mpanohitra. Misy fanamby tsy maintsy natao, voasoratra amin'ny taratasy fampahafantarana ny fandraisana milaza ny porofo ny hetsi-panoherana, ny mpitahiry vola dia mandoa ankapobeny ny sampan-draharaha izay ny fakana an-keriny efa notanterahina. Ny mpitahiry vola efa volana mba hamaly Raha ny hampangina na ratsy valiny, ny mpitrosa dia efa volana mba hilazana ny fitantanana ny mpitsara. Raha toa ny mpitahiry vola nekena ny fanoherana, ny daholobe tahirim-Bola nanome ny famoahana ny mpanohitra ara-panjakana, ary ho reimbursed ny vola efa nanangona ny fahadisoany.
Trano ny - Mba mpisolovava ny fisotroana ao Essonne (Evry)
Чӣ тавр ройгон ҳуқуқӣ намудан ба маслиҳатдиҳӣ адвокат. хизматрасонӣ-ташкилоти ҷамъиятии